Apples - omunye izithelo ethandwa kakhulu emakhulwini izinhlobonhlobo nokunambitheka wonke umuntu angakhetha abawuthandayo kakhulu. Ziyakwazi okuhle, hhayi nje fresh kodwa nezalo izikhala - sezimoto futhi isagcine. Mayelana bayathanda ukupheka ujamu kusuka apula, sichaza kulesi sihloko, ngoba umkhaya ngamunye has iresiphi ayo, futhi uma ungakabi ithole ozithandayo ayo ke mhlawumbe uthola ke, funda i-athikili yethu. Zama ukupheka esiphundu kunazo ebusika kanye ucezu ethandwayo. Oluyisibiliboco edliwayo nje nge itiye, futhi ingasetshenziswa njengendlela ukugcwaliswa for ophaya noma Muffin.
Indlela ukupheka ujamu kusuka apula wekhaya engongi - iresiphi zakudala
Imithetho eyisisekelo lapho ukhetha izithelo zimi kanje: kungcono ukuthatha umsebenzi isiqeshana obukhulu basebusika izinhlobo, inyama ezingenakho liphuke, kodwa ihleli lapho kuphekwe. Ngaphambi ukupheka ukugeza apula, ikhasi kusukela umoba kanye imbewu, futhi othile kususa izithelo ikhasi, futhi kwamanye akudingeki - kungcono okukhethayo. Apples ngemva slicing ngokushesha mnyama. Ukuze ugweme lokhu, ungakwazi ufafaza nabo nge kalamula. Uma ufuna ukufunda indlela ukupheka ujamu kusuka apula wekhaya engongi, funda ku - ozokuthanda lapha iresiphi zakudala:
3 kg apula;
2 kg (noma kancane kancane uma izithelo lumnandi kakhulu) ushukela.
Lungiselela izithelo njengoba kuchaziwe ngenhla, bese usika kubo ibe izingxenye 6-8. Thela ushukela, isiyaluyalu futhi ushiye cishe usuku ukuvumela juice izithelo. Emva kwalesi sikhathi, endaweni epanini ne apula on ukushisa low, imenze thumba bese ukuphela imizuzu 10. Qeda - ujamu kancane epholile, zisakazwa izimbiza inzalo futhi wathumela agcinwe ngaphambi amakhaza asebusika.
Indlela ukupheka ujamu kusuka apula, ithanga nesinamoni
Uma usebenzisa lokhu iresiphi, khona-ke cishe ngeke jam kanye jam - kodwa futhi simnandi kakhulu futhi zibe nephunga elimnandi. Ngokuba ukulungiswa uzodinga:
isigamu kilogram of apula kanye ithanga uginindela;
ithisipuni emhlabathini nesinamoni;
nje ingilazi yamanzi plain.
Ithanga inyama uthathe yizicucu, amboze ngamanzi bese ukubeka sikadali phezu kwesitofu. Ngesikhathi esifanayo, ukulungiselela apula - nalesi sikhathi bakudinga ikhasi, uthathe tincetu encane, bese uthumela ku-sikadali ithanga. Izithelo ingxube yemifino kumelwe alethwe thumba bese ukuphela isigamu sehora. Ngemva apula kanye ithanga pyuriruyte in a blender noma nje bahlanganise lokhuni tolkushkoy amazambane. Uma usulungile, beka oyedwa omningi, isiyaluyalu futhi upheke phezu emlilweni ophansi ihora. Ungakhathazeki uma le jam esishisayo waphenduka uketshezi, ngemva ukupholisa ngeke ukushwaqa. Billet uthele amabhange, futhi sigcine endaweni epholile.
Uma une singekho kwanhlobo isikhathi: njengoba jam umpheki kusuka apula Omuny umatasa. Vele ukupheka kuyo multivarka
Ngokuba ukulungiswa servings encane uzodinga apula kanye ushukela ngendlela isilinganiso 2: 1 (izingxenye 2 izithelo 1 okuyingxenye ushukela). Lungiselela apula, uthathe tincetu futhi uthele ushukela. Beka Multivarki mass endebeni wafaka ukulungiselela imodi "eqeda" ngaphakathi 1 ihora. Phakathi nalesi sikhathi, udinga izikhathi ezimbalwa ukuze uhlanganise le jam. Yilokho yayilula kakhulu futhi okumnandi. Manje ngoba sewuyazi ukuthi izindlela ezimbalwa zendlela yokwenza ujamu kusuka apula - thatha njengesisekelo omunye wabo. Futhi ukulungiselela a okukhulu ebusika uswidi wonke umndeni.
Fedoseyev Gregory Anisimovich Soviet umbhali: Biography, lokusungula
Ukwesekwa wezomthetho umsebenzi okhokhelwayo - panacea noma inkemba esika nhlangothi zombili?
Ubani Contra Puja? Heroes, zobuciko, umdlalo amaqhinga